Mitady fitiavana? Manspreading mety ho Fanalahidin'ny Fahombiazana - News Fitsipika
Mitady fitiavana? Manspreading mety ho Fanalahidin'ny Fahombiazana
Nampiasa lahatsary sy ny Tinder fomba fampiharana, Efa tapa-kevitra ny mpikaroka fa ny olona izay namelatra ny tenany avy no laharana tsara tarehy kokoa ny mety ho mpiara-miasa
Ity lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Mitady fitiavana? Manspreading mety ho fanalahidin 'ny fahombiazana, fanadihadiana” nosoratan'i Iana Sample Science mpamoaka lahatsoratra, ho an'ny The Guardian tamin'ny Alatsinainy 28 Martsa 2016 19.00 UTC
Tsy mampaninona mamirapiratra resaka, emboka madio sy fahatsiarovana ny olona ny anaran'ny. Eo amin'izao tontolo izao ny mampiaraka maoderina, ny zava-miafina ny fahombiazana dia ny hitondra ny toerana.
Ny tendrony mahazatra ny mahita ny fitiavana, na, fara fahakeliny, tia, tonga avy any Etazonia, izay nampiasa hafainganam-pandeha mpikaroka mampiaraka lahatsary sy ny Tinder fomba fampiharana mba hampisehoana fa toy ny olona naoty tsara tarehy kokoa rehefa namelatra ny tenany avy.
Ny olona izay omena ny torsos, nanosika avy ny tongony ka namelatra ny tanany no Novalian-tsoa ny sakany tamin'ny tantaram-pitiavana liana kokoa noho ny hafa, angamba satria ny postures Te hilaza fisokafana sy ny fahefana, ny mpikaroka milaza.
Mifanohitra, ireo izay mivokoka tenany, ary niampita ny tanany sy ny tongony, nahomby zara raha teny an-manao veloma mba handresy ny mety ho mpiara-miasa.
Ny hita dia afaka manampy ny maro ny singletons izay, tamin'ny andron'i Tinder sy ny aterineto mampiaraka toerana, manana afa-tsy vitsivitsy ny sary sy ny segondra vitsy mba hampitana ny valisoa lehibe fa ny fifandraisana amin'izy ireo dia maneho Azo antoka.
Ao amin'ny tatitra nivoaka tao amin'ny Fizotran'ny ny National Academy ny Siansa, Tanya Vacharkulksemsuk tao amin'ny University of California, Berkeley, Milaza ny ekipany ampiasaina lahatsary avy amin'ny hafainganam-pandeha mampiaraka zava-nitranga mba hampisehoana ny fomba na lahy na vavy izay nanangana kokoa "velabelarina be" postures nanana mpiara-miombon'antoka kokoa mangataka ny fanaraha-maso daty.
Izy nanaraka ny amin'ny fanandramana amin'ny Tinder-fomba fampiharana. Telo lehilahy sy vehivavy telo nanaiky roa samy hafa mombamomba noforonina ho azy ireo. Nasehony azy ny iray amin'ny misokatra mametraka, toy ny indray mirona amin'ny tongony hitsotra,, na nitsangana ny fiadiany avy malalaka. Ao amin'ny mombamomba azy hafa, dia natsangana "contractive" mametraka, ohatra, amin'ny alalan'ny hunching ny, na namoritra ny tanany sy ny tongony namakivaky.
Vacharkulksemsuk dia nampakatra ny mombamomba ny faran'ny herinandro sy roa voarakitra izay nanatsoaka ny tantaram-pitiavana indrindra liana. araka ny faminanian'ireo, dia vao mainka nanaram-postures misokatra tsara indrindra eo amin'ny fangatahana hihaona ny. indray, na lahy na vavy soa, na ny vokatry dia lehibe kokoa ho an'ny lehilahy.
Nanoratra tao amin'ny gazety, ny mpikaroka hoe ny splaying ny fitaovam-piadiana sy ny tongotra amin'ny aterineto mampiaraka sary "indrindra, hanokatra tsy am-bava fampisehoana amin'ny aotra olom-pantatra. "
"Araka ny Nahazo vokatra avy amin'ny olona an'arivony tokana amin'ny hafainganam-pandeha mampiaraka ny tena zava-nitranga, ary mampiasa mampiaraka fampiharana, dia hita marimarina fa fanitarana postural afaka mampitombo be ny mety ny olona iray ny fanaovana tantaram-pitiavana voalohany mahomby fifandraisana,"Hoy izy ireo hametraka.
Vacharkulksemsuk miahiahy fa ny fahefana sy ny fisokafana ny olona tsara tarehy kokoa noho ny olona maro indrindra ny hanao tsara kokoa any am-piasana, ary malalaka kokoa ny olona vonona ny hizara ny zavatra eo amin'ny fiainana.
Fianarana ny biby hafa milaza ny olona toy izany dia mety tsy ho samy hafa. Milaza Vacharkulksemsuk mampiseho izay niteraka ny behinds biby sy ny pananahana. Rajako lahy mampideradera ny physicality amin'ny alalan'ny mandaka sy mihazakazaka sideways, raha manintona ny vorombola peahens amin'ny alalan'ny maneho ny rambony volony.
Fihaonana ny olona amin'ny alalan'ny endriky ny aterineto sasany mampiaraka efa lasa ny faharoa fahita indrindra fomba fitadiavana ny mpiara-miasa, rehefa avy nihaona tamin'ny alalan'ny namana. Efa ho 91m ny olona mampiasa finday avo lenta mba hahita mpiara-miasa, about 70% izay kosa efa fotsy volo 16 ny 34, ny mpanoratra manoratra.
"Ny sehatra toy izany, izay nahazo ny olona iray hafa daty amin'ny matetika dia manomboka amin'ny sary na fohy fifandraisana, dia mahasoa ny mahafantatra ny fomba hahabetsaka ny vintana iray ao anatin'ny ahena toy izany potoana,"Hoy izy ireo hametraka.
Hamorona mpahay siansa Mazava-in-the-Dark Bitro
75 Isan-jato ny olona hividy ny Wrong Digital Camera
21472	4 Article, Dating, Iana Sample, Main section, Online mampiaraka, Psychology, fifandraisana, Science, The Guardian, Tinder, UK vaovao
← Virtual Reality Porn avy Dyson nandefa Madio Cool Air Link hanadio →